Inani eliphansi le-A3 UV Printer China Manufacturer
Incazelo:Inani lephrinta ye-A3 UV,I-A3 UV Printer India,I-A3 UV Printer UK
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta ye-UV ephepheni > Inani eliphansi le-A3 UV Printer
Amaklayenti ethu angathola kithi ikhwalithi evelele ye-Vertical Operated UV Flatbed Printing Machine okuyinto eyenzelwe ngokukhethekile ukunyathelisa ihluzo ezinkulu zefomethi ngqo kuzo zonke izinto. Ukuze simelane namazinga wekhwalithi, sisebenzisa izingxenye zekhwalithi eziphezulu nobuchwepheshe obuphambili ukuze senze lo mshini wokunyathelisa. Ngaphezu kwalokhu, thina sihlolisisa lo mshini ngokumelene nemingcele yekhwalithi ehlukene ukuze siqinisekise ukusebenza kwayo kwezinkinga.
I-A3 Iphrinta ye-UV uhlobo oluthile lokusebenzisa imishini yedijithali ye-"ye-non-contact" ye-jet, uhlelo lokusebenza lwe- A3 UV Printer Price olunzulu kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
Izici eziwusizo ze- A3 UV Printer yethu yaseNdiya RF-A3UV:
2. I- A3 UV Printer UK ingafakwa nge-Height Detecting sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
3. Iphrinta ye-UV ebizwa nge-flatbed ebizwa nge-Flatbed I-cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli yeNkinobho, uma inkinobho iphelile kuyobe ivusa;
Iphrinta ye-UV esebenzayo isetshenziswa Xhumana Nanje
Ukunyatheliswa kwe-UV e-Chennai Xhumana Nanje
Umshini wokunyathelisa we-UV Xhumana Nanje
I-UV Flatbed Printing Technology Xhumana Nanje
Inani lephrinta ye-A3 UV I-A3 UV Printer India I-A3 UV Printer UK Inani lephrinti ye-A4 UV Inani lephrinta le-3d Inani lephrinta ye-Dtg Inani lephrinta yeCD Inani lephrinta ye-Cake